अस्ट्रेलियामा जातीय विभेदको शिकार बनिन् शिल्पा शेट्टी, सोशल मीडियामार्फत पोखिन आक्रोश ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»अस्ट्रेलियामा जातीय विभेदको शिकार बनिन् शिल्पा शेट्टी, सोशल मीडियामार्फत पोखिन आक्रोश !
By मनिषा थापा on ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०७:१६ हलिवुड/बलिवुड
पिएनपिखबर, भक्तपुर : शिल्पा शेट्टीलाई सिड्नीबाट मेलबर्नको यात्राको क्रममा नस्लभेदी व्यवहारको सामना गर्नु पर्यो। उनलाई चेकिङ्गको समय गलत व्यवहार भएको उनले सामाजिक संजालमार्फत बताएकी छिन्। यति मात्रै हैन उनलाई जातीय विभेद पनि सामना गर्नु पर्यो जसकारण उनी निकै आक्रोशित भएकी थिईन।
उनले यस घटनालाई विर्सिनु भन्दा यसमा आवाज उठाउनु उपयुक्त ठानिन्। इंस्टाग्राममा एक पोस्ट शियर गर्दै लेखिन,’मेरो ब्याग जबरन ओवरसाइज बताइयो र त्यस क्याबिनमा राख्न अस्विकार गरे। ‘ यसैबीच शिल्पालाई आफूमाथि जातीय भेदभाव भएको अनुभब भयो।
ब्याग तय आकारभन्दा सानो र हलुका रहेको र एयरपोर्टका स्टाफले पनि अभद्र व्यवहारगरेको शिल्पाको आरोप छ। शिल्पाले ब्यागको साथमा आफ्नो एक तस्वीर शेयर गर्दै फ्यानसँग सोधिन, ‘यो ब्याग यति गरम छ जसलाई लिएर म जहाजमा यात्रा गर्न सक्दिन ?’ यस अघि पनि शिल्पालाई २००७मा प्रसारित भएको टिभी शो ‘बिग ब्रदर’मा पनि जातीय विभेदको शिकार भएकी थिइन्।